Kandida solombavambahoaka neken’ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana (CENI) hiatrika ny fifidianana hatao amin’ny 27 mey 2019 i Rakotozafy Haingotiana Denis Fugain Bozon, narotsaky ny vovonana « Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina ».
Ny alin’ny alahady 10 martsa 2019 i Bozon no nisy naka an-keriny teny an-dalana raha nandeha moto hanatitra ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiana ho solombavambahoaka tao amin’ny OVEC Tsaratanàna.
40 tapitrisa Ariary no vola notakian’ireo mpaka ankeriny ho tambin’ny famotsorana azy. Efa nandoa 25 tapitrisa Ariary ny fianakaviany nefa izao novonoin’ireo mpaka ankeriny izao ilay kandida.
Teknisianina ambony "planificateur" nahavita fiofanana tao amin'ny IMATEP i Bozon, efa Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena (DREN) tao Betsiboka tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana, ary izy no talem-paritra zandriny indrindra tamin’ireo andiany niara-notendrena taminy tamin'izany.